Ady amin’ny hosoka sy fakàna an-keriny : Tafapetraka ny fitaovana vaovao fanontana « plaque châssis » amin’ny fiara – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:43
Ilay fitaovana vaovao enti-manatsara ny asa eo amin’ny DGSR.
Accueil/Fanadihadiana Manokana/Ady amin’ny hosoka sy fakàna an-keriny : Tafapetraka ny fitaovana vaovao fanontana « plaque châssis » amin’ny fiara
Apetraka isaky ny renivohitry ny faritany enina ny fitaovana vaovao fanontana takelaby famantarana manokana ny fiara iray na ny « appareil duplicateur informatisé de plaque châssis » ho an’ny ivon-toerana fitsarana fiarakodia. Nisitraka izany ny tany amin’ny Faritra Boeny, ny afakomaly lasa teo. Napetraka hoenti-miady amin’ny hosoka sy fakàna an-keriny tanterahin’ny jiolahy ity fitaovana vaovao ity. Fanadihadiana…
Rado Harivelo 2 juillet 2021
Notanterahina tamin’ny fomba ofisialy afakomaly lasa teo, teo amin’ny Ivon-toerana fitsarana fiarakodia Amborovy Mahajanga, ny fanolorana ny fitaovana vaovao fanontana ny takelaby famantarana manokana ny fiara iray na ny “appareil duplicateur informatisé de plaque châssis” ho an’ity Ivon-toerana fitsarana fiarakodia ity. Harifomba tokoa ity fitaovana ity satria manaraka ny teknolojia maoderina ho enti-misoroka ny fampiasana hosoka. Ankoatra ny resaka hosoka sy fampiasana hosoka, dia natao hiadiana amin’ny halatra fiara sy manampy amin’ny fanadihadiana momba ireo fiara nampiasaina tamin’ny asan-jiolahy samihafa. Goavana amin’izany ny resaka fakàna an-keriny, izay matetika hampiasan’ireo olon-dratsy sy mpanao « kidnapping » fiara.
Naseho teto ny momba ilay fitaovana manaraka ny teknolojia vaovao.
Ny Ivon-toerana miorina amin’ireo renivohi-paritany enina no natao laharam-pahamehana amin’ny fametrahana ity fitaovana ity. Efa nametrahana izany ny Ivon-toerana fandraisana ara-teknika Alasora Antananarivo, ny Ivon-toerana ao Toamasina sy Antsiranana. Hotanterahina amin’ity volana jolay 2021 ho avy izao, ny fanolorana amin’ny fomba ofisialy ny anjaran’ny Ivon-toerana ao Fianarantsoa sy Toliara. Mitohy hatrany ny ezaka ataon’ny Foibe fitsarana fiarakodia (DGSR) amin’ny fametrahana fitaovana harifomba manaraka ny fivoaran’ny teknolojia ho an’ ireo Ivon-toerana (CENSERO). Teo anatrehan’ireo manampahefana sivily sy miaramila isan-tsokajiny tao amin’ny Faritra Boeny, no nanaovana fanolorana tamin’ny fomba ofisialy ity fitaovana vaovao fanontana ny takelaby famantarana manokana ny fiara iray ity.
75000 Ar ny sandan’ny fanoloana…
– Ny Jly Nicolas Tsirivelo, Tale jeneralin’ny Foibe fitsarana fiarakodia nitondra ny fanazavana.
Ny foibe fitsarana fiarakodia (DGSR), amin’ny alalan’ireo Ivon-toerana misandrahaka manerana ny Nosy no voafaritry ny lalàna ho afaka manolo sy manao ny fanontana (duplicata) ny “plaque châssis”, aorian’ny fanamarinana ny fahaverezany, ny fahasimbany, na ny faniriana hanavao. Mba hisorohana ny resaka kiantranoantrano na ny mety endrika kolikoly, dia nampahafantarina ho an’ny besinimaro fa 75.000 Ar no sandan’ny fanatanterahana ny fanoloana. Nohararaotin’ny Jly Nicolas Tsirivelo, Tale jeneralin’ny Foibe fitsarana fiarakodia koa ny fotoana nihaonana, mba hampahafantarana ireo ezaka samihafa notanterahin’ny Foibe fitsarana fiarakodia raha. Tafiditra ao ny fanatsarana ny fomba fiasa toy ny fialàna amin’ny gaboraraka sy ny kolikoly amin’ny endriny samihafa. Ny ady atao amin’ny hosoka sy fampiasana hosoka. Ny fampitomboana ny fitsirihana tampoka eny an-dalambe na « contrôle inopiné » ho fampanarahan-dalàna ireo fiara, mba ho fisorohana ny lozam-pifamoivoizana ateraky ny tsy fahatomombanana ara-teknika; ny fanenjehana ireo fiara mamoaka setroka tafahoatra mitarika fahasimban’ny tontolo iainana.
– Teto amin’ny Ivon-toerana fitsarana fiarakodia Amborovy Mahajanga, ny fanolorana ny fitaovana vaovao.
Ezaka goavana tanterahin’ny Foibe fitsarana fiarakodia koa ny fanokafana Ivon-toerana ho fanakaikezana ny mpanjifa. Isan’izany ny tany Ambositra, Nosibe sy ny maro hafa. Nanentana ny rehetra koa izy amin’ny fampitana vaovao mahakasika ireo fiara efa tsy tokony hifamezivezy eny amin’ny arabe noho ny tsy fahatomombanana ara-teknika hita maso miharihary, ratsy endrika ivelany mba hisorohana ny lozam-pifamoivoizana, sy ireo fiara mamoaka setroka tafahoatra. Nitondra fanentanana ho an’ ireo mpitandro filaminana, izay miandraikitra ny fanaraha-maso ny fifamoivoizana koa izy, mba ho hentitra amin’ny fanatanterahana ny fisavana fa dia betsaka ireo fiara tsy nandalo fitsirihana ara-teknika mihitsy sy efa lany paikandro, nefa mbola mifamoivoy ankalalahana eny an-dalambe ka mitera-doza.
Foibe fitsarana fiarakodia
Mitohy ny fampahafantarana sy ny fizarana traikefa eo amin’ireo sehatrasa
Nanatanteraka famelabelarana ny asa sy ny andraikitra sahaniny ary fampahafantarana ny Foibe fitsarana fiarakodia na DGSR, ny ekipa notarihin’ny Kly Rasambomanana Yvon Patrick, Tale misahana ny fandrindra ny fifamoivoizana an-dalambe, tetsy amin’ny Foibe fibaikoana ny Zandarimariam-pirenena Toby Jeneraly Ratsimandrava, afakomaly. Nandray anjara tamin’izany ireo manamboninahitra zandary miofana ao amin’ny Sekoly ambony ny Zandarimariam-pirenena Moramanga, manao ny CAO na “cours d’application des officiers” andiany faha-45. Fampahafantarana misimisy kokoa ny antom-pisiany sy ny asan’ny DGSR, izay mifototra amin’ny fizahana mialohan’ny fadintseranana (Constatations avant dédouanement). Eo koa ny fandraisana ara-teknikan’ny fiarakodia. Manampy ireo ny fitsirihana ara-teknikan’ny fiarakodia sy ireo didy aman-dalàna mifehy ny asa. Nojerena koa ny zava-misy ankehitriny sy ny fanatsarana hoentina hanatsarana ny asa, ho fanomezana fahafaham-po ireo mpanjifa. Tsy nohadinoina ny fifanakalozan-kevitra ary ny fanomezam-panazavana ho valin’ireo fanontaniana napetrak’ireo Manamboninahitra mpiofana. Isan’ireo tonga nizara traikefa tao ny Kly Razafimandimby Dieu Donné, lehiben’ny Sampanasa teti-pivoarana sy fandinihana ankapobeny (SPEG), ny Komandà Rakotomampianina Rija Alberto, Lehiben’ny sampanasa fanaraha-maso sy tombana ezaka (SSE) ary ny Kapiteny Ralandiranto Rado, Lehiben’ny Ivon-toerana fitsarana fiarakodia (CENSERO) Betongolo.
Misokatra amin’ny sehatrasa hafa…
– Mila hamafisina ny fisavana isorohana ny mety tsy fanarahan-dalàna.
Vaindohan-draharahan’ny Foibe fitsarana fiarakodia ny fanomezana fiofanana sy fizarana traikefa amin’ny sehatrasa hafa. Isan’ireny ny fanomezana fiofanana ireo mpamily fiarakodia avy tamina orinasa mpampiasa fiarakodia. Ny avy ao amin’ny CNaPS, ohatra, no nisantarana izany fifampizarana traikefa izany, izay midika avy hatrany fa misy ny fisokafan’ny Foibe fitsarana fiarakodia sy ho fanakaikezana kokoa amin’ireo sehatrasa mpampiasa fiarakodia. Nambaran’ny Tale jeneralin’ny Foibe fitsarana fiarakodia, ny Jly Tsirivelo Nicolas fa « tanjona ny tokony hikojakojana ny fiara, mba ho fiarovana ny aina sy ny fananana araka ny teny filamatra hoe « Lahitokana ny aina ».
Nampahatsiahivina ny rehetra fa ilaina ny fanajana ny didy aman-dalàna mifehy ny fifamoivoizana, mba hanamarihana fa tany tan-dalàna tokoa no misy antsika sy fanatsarana ny fahaiza-manaon’ireo mpamily. Nisy ny fizarana taratasy fanamarinana anaporofoana fa ananan’izy ireo ny fahalalana sy ny fahaizana amin’ny fisorohana mialoha ny loza ateraky ny tsy fahatomombanana ara-teknika sy ny fialàna amin’ny tandrevaka ataon’ny mpamily. Tiana ny manamarika fa nahatratra 55 ny isan’ireo mpamilin’ny fiaran’ny Cnaps no nahavita fiofanana teo anivon’ny Foibe fitsarana fiarakodia.
Ilaina hatrany ny misoroka ny loza…
Nasongadin’ny Tale jeneralin’ny Foibe Fitsarana fiarakodia, ny Jly Nicolas Tsirivelo fa « antony mahatonga ny loza maro, dia ny tsy fitandreman’ny mpamily. Ny fanaovana fitsirihana ara-teknika ny fiara dia anisan’ny fisorohana ny lozam-pifamoivoizana ». Misy anefa ireo fiara tsy mandalo fitsirihana ara-teknika mihitsy na efa lany paikandro, saingy mbola mivezivezy ka mety hitera-doza. Noho izany, mila hentitra amin’ny fisavana ny antontan-taratasin’ny fiara, indrindra ny mikasika ny fitsirihana ara-teknika (visite technique) satria lahy tokana ny aina.
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA : Hotohizina ny fampandrosoana napetraka, 62 taona lasa